होसियार! फसिएला है हनीट्रयापमा :: Setopati
होसियार! फसिएला है हनीट्रयापमा
शंकर खड्का चैत २६
सुन्दरी युवतीको प्रयोग गरी पुरूषहरूलाई फसाउने तथा उनीहरुको गोप्य गतिविधिको भिडिओ बनाई ब्ल्याकमेलिङ गर्ने कार्यलाई हनीट्र्याप भनिन्छ।
प्रविधिको विकाससँगै प्रविधिको दुरुपयोग गरी नयाँ-नयाँ अपराधहरू समाजमा मौलाएका छन्। यही प्रविधिको कारणले कुनै पनि अपराधिक मनसाय भएका मानिसहरुले सहज तरिकाले अपराध घटाउन सक्छ जसले गर्दा उच्च ओहदाका प्रतिष्ठित व्यक्तिले हनीट्र्यापबाट पीडित हुनु परेको छ।
अहिलेको बदलिँदो परिस्थिति अनुसार अपराधका घटनाहरू फरक-फरक तरिकाले हुने गरेको छ। देशमा बढ्दो बेरोजगारीको समस्या, बढदो सामाजिक संजालको प्रयोग, कोभिड-१९ ले विश्वमा अर्थतन्त्रमा पारेको असर, बढदो गरिबी,
राता-रात धनी बन्ने सपना, सामाजिक संजालमा अपरिचित व्यक्तिलाई साथी बनाउन र त्यस्ता साथीहरूको सजिलैसँग विश्वास गर्नू, आफ्नो कर्तव्य बिर्सनू, अपरिचित व्यक्तिले बोलाएको ठाउँमा एक्लै जानू तथा फोटोहरू खिच्नू।
कुनै पनि मानिसको कमजोरी पत्ता लगाई सुन्दरता एवम् यौनको माध्यमद्वारा फसाउने कार्यमा पछिल्लो समय युवतीहरूलाई अपराधी मनसाय भएका मानिसले प्रयोग गर्न थालेका छन्। विभिन्न किसिमका घटना हेर्दा आफ्नै दौतरीहरुले समेत ठगेका छन्।
हनीट्र्यापमा पार्ने युवा-युवती सुन्दर हुन्छन्, अपराधिक समूहको योजनाबाट परिचालित हुन्छन्। जसको उदेश्य मनग्य सम्पत्ति भएका परिवारलाई नाटकीय रुपमा लुट्नु, ब्ल्याकमेल गर्नु हुन्छ।
आँखामा गगल्स, दिनहुँ गेटअप चेन्ज, स्कुटर र ट्याक्सीको यात्रा, जग्गा कारोबारी भनेर अर्काको जग्गा देखाउने, कसैलाई बिजनेश पार्टनर बनाउने र धोका दिने। गफैगफले आफ्नो लवाई खुवाईले अरुलाई प्रभावित पार्ने र ठगी गर्ने गरेको पाइएको छ। उनीहरुमा अरुलाई फकाउने क्षमता पनि उच्च देखिन्छ।
आधुनिक समाज, आर्थिक अभावका कारण पनि यस्ता अपराधमा संलग्नता भएको पाइन्छ। यो एउटा संगठित अपराध हो। बढीभन्दा बढी महिलालाई प्रयोग गर्ने, मायाको भाव देखाउने, इमोस्नल्ली एटेचमेन्ट गर्ने, पैसाको प्रलोभन पार्ने।
तिमीलाई केही हुँदैन भन्ने आर्थिक प्रलोभन देखाउने, फोन गरेर बोलाए बापत २०/२५ हजार दिने। यही इजी मनीका लोभले महिलाहरू यस्ता अपराधमा संलग्न भएको पाइन्छ।
आफ्नो परिचय सार्वजनिक होला भन्ने डरले कतिपय व्यक्तिले प्रहरीमा उजुरी पनि दिने गरेको छैन। हालसालै महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले दुई महिलालाई पक्राउ गरेको थियो। घटना केही दिनअघि सुर्खेत वीरेन्द्रनगर घर भएकी लालसरी शाही (ललिता) र उनकी सहयोगी कल्पना हमाल पक्राउ पर्नुको कारण थियो, हनीट्रयाप।
प्रहरीका अनुसार कोटेश्वर बस्ने एक पुरुषलाई ललिताले सुन्धारास्थित गेष्ट हाउसमा भेट्न बोलाइन्। कोठामा पुगेपछि अश्लील गतिविधिको भिडिओ खिच्न कल्पनालाई लगाइन्।
५२ वर्षे ती पुरुषलाई ललिताले सुन्धारास्थित होटलमा बसेको समयमा सबै पैसा हराएको कारणले समस्यामा परेको हुँदा सहयोग गरिदिनको लागि अनुरोध गरेर बोलाएकी थिइन्।
एक वर्षदेखि चिनजानमा रहेका उनी होटल पुगेपछि बार्गेनिङका लागि भिडिओ खिचिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ। दुवैले पटक-पटक गरेर तीन लाख रुपैयाँ लिएको र थप ८ लाखको माग गरिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सफल भएको हो।
कतिपय हाईप्रोफाइल व्यवसायी हनीट्र्यापमा परेर अकालमा आफ्नो ज्यान गुमाउन परेको छ। २०७४ सालतिरको घटना हो, दाङको तुलसीपुरका ५३ वर्षिय व्यवसायी राजकुमार श्रेष्ठलाई प्रेमिका भनिएकी १८ वर्षीया पुजा घर्तीले हनि ट्रयापमा पारेर सल्यान पुर्याएर त्यहीं उनको हत्या भयो।
सोही घटनामा २८ वर्षीय रणबहादुर घर्तीको पनि हत्या गरिएको थियो। सो घटनाका योजनाकार पुजाका मामा मानबहादुर भण्डारी, बुवा टिकाराम घर्ती र भूपेन्द्र भण्डारी थिए।
केटाहरूलाई माया गर्छु भनी सम्बन्ध विस्तार गर्ने, माया गरेजस्तो गर्ने, उनीहरूलाई अंगालो हाल्ने, चुम्बन गर्ने, पछि गएर यस्ता फोटो तथा भिडिओलाई प्रयोग गरी ब्ल्याकमेल गर्ने गरेको पाइन्छ।
कतिपय सुन्दरी महिलाहरू केटा मानिसलाई भेट्न बोलाउने, बोलाइसकेपछि होटलको कोठामा लैजाने। कोठाभित्र सम्पूर्ण लुगा कपडा खोल्न लगाउने। त्यसपछि सोही कोठामा आफ्ना साथीहरूलाई बोलाई फोटो तथा भिडिओ खिच्न लगाउने र ब्ल्याकमेलिङ गर्न लगाउने जस्ता घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ।
यस्ता घटनामा वृद्धि हुनको मुख्य कारण पीडितले प्रहरीलाई आफ्नो इज्जत जाने तथा घरव्यवहार बिग्रर्ने डरले गर्दा समयमा जानकारी नगराउँदा यस्ता अपराधामा संलग्न अपराधीहरूको मनोबल बढ्ने जसले गर्दा अन्य मानिसहरू पनि यिनीहरूको जालोमा फस्ने गरेका छन्। यस्तो जालोमा समाजका धनाढ्य तथा प्रतिष्ठित व्यत्तिहरू फस्ने गरेको अनुसन्धानले बताएको छ।
प्रहरी कार्यालयमा आएर उजुरी नदिँदा समाजमा यस्ता घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै छ। यसको लागि सबै सरोकार निकाय तथा पीडितले समयमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनु पर्छ।
इज्जत जान्छ भनेर अपराधलाई लुकाएर राख्नु हुँदैन। यसरी लुकाउँदा अन्य मानिसहरू पनि यस्ता अपराधीहरुको शिकार हुन सक्छन्। अपराधलाई लुकाउनु भनेको उसलाई फेरि अपराध गर भनेर मनोबल बढाउन हो।
प्रशासन माथिको अविश्वास, फितलो कानुन कार्यान्वयन, वैदेशिक रोजगार, गरिबी, अशिक्षा, हलिउड, बलिउड, इन्टरनेट, साइबर, फेसबुक, टिकटक, मोबाइल फोनको विकास, त्यसप्रति बढ्दै गइरहेको नेपाली समाजको पहुँच। यसले गर्दा अपराधको शैली फरक हुँदै गएको छ।
यस्ता किसिमका घटनामा कमि ल्याउनको लागि समयमा प्रहरीलाई जानकारी गराउने तथा उजुरी दिनु पर्छ। फेसबुकमा नचिनेका व्यक्तिलाई साथी नबनाउने, अपरिचित व्यक्तिले बोलाएको ठाउँमा नजाने तथा त्यसता व्यक्तिसँग फोटो नखिचने, शंका लागेको खण्डमा समयमा प्रहरीलाई जानकारी गराई ठूलो घटना हुनबाट जोगिन सकिन्छ।
यस्ता किसिमका क्रियाकलाप भएमा आफ्नो घरपरिवारलाई पनि सेयर गर्ने, घरपरिवार तथा आफ्ना छोराछोरीलाई सम्झेर संचेत हुनु पर्छ। सरोकारवाला निकायले यो सम्बन्धी अडिओ, भिडिओ मार्फत चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्न आवश्यक छ।
राम्रो आम्दानी भएका, आर्थिक रूपमा सम्पन्न रहेका तर विवाह भएका पुरूष वा महिलासँग कसैले सम्बन्ध स्थापित गरिरहेको छ भने त्यस्तो बेला साबधानी अपनाउनु होस्, त्यो हनीट्र्याप हुनसक्छ।
अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रोसँग निगरानी गर्ने, गलत संगतमा लाग्न नदिने उपाय अपनाउनु पर्छ। कोसँग संगत गर्ने गरेको छ, सो बारेमा जानकारी राख्ने गर्नुपर्छ। यस्ता उपाय अपनाएको खण्डमा उनीहरु अपराधमा संलग्न हुँदैन र अपराधको बाटो रोज्दैनन्।
कुनै पनि महिला तथा पुरूषको बाहिरी सुन्दरता हेरेर सम्बन्ध स्थापना गर्दा ध्यान नदिएको खण्डमा त्यही बाहिरी सुन्दरताले भविष्यमा पछुताउनु पर्ने हुन्छ। समयमा संचेत हौँ, हनीट्र्यापबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २६, २०७७, १५:१६:००